Komban Bus Skin Khuphela Android [BUSSID Livery]-Luso Gamer
Komban Bus Skin Khuphela Android [BUSSID Livery]
Ngaba ukhe wadlala eyona midlalo idumileyo yeBus Simulation ebizwa ngokuba yiBUSSID? Ukuba ewe ke usenokuba sele uqhelene noLusu kunye namanye amacandelo. Namhlanje apha sibuyile ngesi sixhobo simangalisayo esenza ukuba abadlali batofe i-Komban Bus Skin eyaziwayo.
Xa abadlali bengaqhelananga nomdlalo wokudlala, ubukhulu becala abaqondi ukubaluleka kwezikhumba. Nangona kunjalo, xa umdlalo waziswa okokuqala, abadlali bavunyelwe ukonwabela amathuba angenasiphelo. Ezo ziquka izikhumba, iziphumo kunye nezinto eziphuculweyo.
Emva kwexesha elithile, zonke ezo zixhobo zifikelelekayo zigcinwa ngaphakathi kudidi lweprimiyamu. Oko kuthetha ukuba abadlali abavumelekanga ukuba banandiphe izinto zepro. Ngaphandle kokuba baphumelele ekuthengeni imirhumo batyala imali yokwenyani.
Yintoni iKomban Bus Skin
I-Komban Bus Skin sisikripthi sangaphandle esilungisiweyo samva nje esiyilwe ngabaphuhlisi. Injongo yokwakhiwa kwesi sinxibo kukubonelela ngoyilo olulodwa. Oko kuvumela abadlali ukuba bonwabe kwaye bachukumise abanye ababukeli.
Kuba lo mdlalo usebenza kakuhle nabanye abadlali. Nokuba ayizukulunga ukuba sibiza umdlalo ngabadlali abaninzi. Kuba iqonga libonelela ngale seva yabucala ye-intanethi. Apho abadlali kwihlabathi liphela banokujoyina kwaye bathathe inxaxheba.
Ukanti xa sithetha ngobubodwa kunye nomtsalane. Emva koko izakhono zokudlala zithathwa njengendima ephambili. Ngaphandle kwezakhono zokudlala, izinto zepro ezifana nezikhumba kunye neziphumo zikwajongwa njengezibalulekileyo.
Ukuba umtsha kweli qonga, ke iakhawunti yakho yokudlala ayinakuze ivumele ukufikelela kwizinto eziphambili. Phakathi kwabanye abadlali, ibhasi yakho iya kujongeka ingathandeki kubabukeli. Ke ngoko ngokuthathela ingqalelo izikhumba zasimahla apha sizise esi sixhobo.
Ngoku ukudibanisa isixhobo kuya kuvumela abadlali ukuba batofe kwaye bahluke kule livery idumileyo. Eyona nto ithathwa njengeyona nto ibiza kakhulu kwaye inqabileyo ngokwembonakalo. Ukanti ulusu oluyilwe ngokukodwa alufikeleleki ngaphakathi evenkileni.
Ukusukela ekuqaleni komdlalo wokudlala ezahlukeneyo ezinye iilivery zongezwa ngaphakathi. Kodwa ngoku ezo Zikhumba ziye zaxhaphaka phakathi kwabanye abadlali. Nangona kunjalo, abaphuhlisi bafaka olu khetho lumangalisayo oluvumela abadlali ukuba bayile i-livery eyahlukileyo.
Ukuba kukho nawuphi na umdlali ophumeleleyo ekwakhiweni kwesikhumba sakhe esiphuphayo. Emva koko uvumelekile ukuba afake i-livery ngaphakathi kwe-gameplay ngokuthe ngqo. Ngaphaya koko, akunakwenzeka ukufaka ezinye izinto ngaphakathi komdlalo.
Nangona kunjalo, abaphuhlisi bafaka olu khetho ngaphakathi. Ngoku iKomban Bus Livery ithathwa njengeyona nto idumileyo efikelelekayo kwi-intanethi. Nangona abadlali abaninzi bekhangela ifayile ukuze bayifake ngaphakathi komdlalo.
Nangona kunjalo, uninzi lwabadlali bayaphoxeka. Kodwa apha kwiwebhusayithi yethu, ukhetho oluthe ngqo lokukhuphela luyafikeleleka. Hlanganisa nje i-Komban Bus Skin Khuphela kwaye ukonwabele ukutofa i-livery ethile simahla ngaphandle komrhumo.
Ifayile yeapp ikhululekile ukukhuphela.
Ifayile ye-app kulula ukuyitofa.
Iyakwazi ukuguqulwa ngaphakathi.
Thatha ngaphandle ifayile ngokuthe ngqo kulungiselelo lokuseta.
Akukho ntengiso zivunyelweyo.
Kusetyenziswa umboniso womzobo okwinqanaba eliphezulu.
Umboniso wawugcinwe uyi-3D.
Umfanekiso weskrini we-Skin
Ukhuphela njani iKomban Bus Skin
Ngaphandle apho ezininzi iiwebhusayithi zibanga ukuba zibonelela ngeefayile ezifanayo simahla. Kodwa eneneni, ezo webhusayithi zibonelela ngeefayile ezingeyonyani kunye nezonakeleyo. Ke kufuneka benze ntoni abadlali be-android kwimeko enjalo xa bengakwazi ukufumana iqonga lokwenyani?
Ke kwimeko enjalo xa ungakwazi ukufumana iqonga lokwenyani nceda undwendwele iwebhusayithi yethu. Kuba apha kwiwebhusayithi yethu sinika kuphela iifayile ze-Apk eziyinyani kunye nezangaphambili. Ukuqinisekisa ukuba ukhuseleko lomsebenzisi sele siyifakile ifayile ekhutshelweyo kwii-smartphones ezahlukeneyo.
Uyisebenzisa njani le App
Okokuqala, khuphela ifayile ye-app kwiwebhusayithi yethu.
Ngoku ndwendwela indawo yokugcina ephathwayo ukujonga ifayile ye-zip yokukhuphela.
Khipha ifayile ye-zip kwaye wahlule ifayile ye-.scs.
Vula iSimuli seBhasi eIndonesia.
Emva koko ndwendwela ideshibhodi yokumisela kwaye ufumane umngenisi wefayile.
Nje ukuba ulufumene ukhetho, ngoku ngenisa ifayile kwaye wonwabele ulusu olutsha.
Ifayile inokubekwa ngokuthe ngqo ngaphakathi kwe-Android> ifolda ye-OBB.
Ifayile ye-app ekhutshelweyo esiyibonisa apha sele ifakiwe kwii-smartphones ezahlukeneyo. Emva kokudibanisa isixhobo kwii-smartphones ezahlukeneyo. Asifumananga ngxaki ngqo ngaphakathi kwaye iyasebenza kuzo zonke ii-smartphones ze-android.
Uninzi lwezinye ii-apps ezihambelana nokulinganisa umdlalo ziyafikeleleka apha kwiwebhusayithi yethu. Ukufakela kwaye ukonwabele ezo ezinye ii-apps zokudlala nceda ulandele ii-URLs. Ezizi I-Bus Simulator Ultimate Ulusu Apk kwaye I-Sim Sim yebhasi engapheliyo.
Ukuba uyathanda ukudlala iBus Simulator Indonesia kunye nokukhangela umthombo we-intanethi wokutofa izikhumba zebhasi zasimahla. Emva koko sicebisa abo badlali be-android bafake i-Komban Bus Skin app. Oko kuyafikeleleka ukukhuphela ukusuka apha ngokhetho olunye lokucofa.
iindidi izixhobo, apps tags Komban Bus Skin, Komban Bus Skin Khuphela Post yokukhangela
I-IMOBA entsha ka-2022 yokukhuphela i-apk ye-Android [Injector yeML]
PenguinsTok Apk Khuphela Android [TikTok Enye indlela]